ACTUALITE/ CULTURE/ Economie/ SOCIAL
Nahomby ny andiany faharoa tamin’ny tsena ara-toekarena izay natao teto Morondava. Nisy ny orinasa niorina izay mandray mivantana ireo drakaka ahondrana any ivelany taorian’ny hetsika. Tratra ny tanjona ka hiroso amin’ny andiany manaraka indray. Amin’ny volana aogositra ho avy izao ny andiany fahatelo ho an’ny foara ara-ekonomika Renala Morondava 2017. Mazava ho azy fa ao Morondava ihany no hanatanterahana izany.
“Hiavaka ity andiany ity satria hitambatra ao avokoa na ny ara-koltoraly na ara-tsosialy fa indrindra ny ara-toekarena”, hoy ny Lehiben’ny Faritra, Gilbert Romain.
Ankoatra izany, hampivondronana ny distrika mandrafitra ny faritra Menabe ny hetsika satria ho hita mandritra ny foara ireo seham-pihariana rehetra mampiavaka ny distrika tsirairay avy.
Sehatra iray hisintonana ireo mpiara-miombona antoka sy mpamatsy vola mba tsy hisalasala fa hanampy sy hiara-hiasa amin’ny faritra Menabe noho izany no tanjona eto.
‹ UNESCO: Le mécanisme de communication entre les journalistes et forces de l’ordre amélioré.	› TFI: Mitohy ny tolona manoloana ny fibodoana ny Nosy Malagasy sy ny fivarotana tanindrazana.